Iran - 400 ny tahan'ny fahafatesan'ny horohoron-tany Irak
Home » Travel Associations News » Iran - 400 ny tahan'ny fahafatesan'ny horohoron-tany Irak
Horohoron-tany nahatratra 7.3 mahery no namely ny faritry ny sisintany manelanelana an'i Iran sy Iràka, namono olona 400, saika ny rehetra tao Iran.
Ity dia tatitra nataon'ny Iraniana Press TV: ny ivon'ilay horohoron-tany, izay nitranga tokony ho tamin'ny 09:18 alina, ora teo an-toerana ny alahady (0010 GMT ny alatsinainy), dia 32 kilaometatra atsimon'ny tanànan'i Halabja, Irak, ao Kurdistan Irak, ary eo ampitan'ny sisin-tany akaikin'i Iran fotsiny, hoy ny fanadihadiana nataon'ny Etazonia (USGS).
Saingy ny fahavoazana lehibe indrindra dia tao an-tanànan'i Sarpol-e Zahab, ao amin'ny faritanin'i Kermanshah Iran.
Raha ny filazan'ny tompon'andraikitra ofisialy dia Iranianina 395 no voamarina fa maty hatramin'ny alatsinainy tolakandro. 6,650 XNUMX hafa hafa koa naratra.
Ny fahavoazana dia hita tao amin'ny tanànan'ny Iran, Qasr-e Shirin, any amin'ny faritanin'i Kermanshah, taorian'ny horohoron-tany mahery 7.3 tamin'ny 12 Novambra 2017.
Nilaza ny Fikambanana Nasionaly momba ny fitantanana ny loza voajanahary ao Iran fa ny fanapahana herinaratra dia notaterina tany amin'ny faritanin'i Kermanshah. Tanàna maromaro any Andrefan'i Iran koa no nahita faharavan'ny ambaratonga samihafa.
Mandidy ny asa famonjena haingana ny mpitarika
Fotoana fohy taorian'ny nitrangan'ilay horohoron-tany dia namoaka hafatra ny mpitarika ny Revolisiona Islamika Ayatollah Seyyed Ali Khamenei miantso ireo tompon'andraikitra sy andrim-panjakana Iraniana rehetra mba "hirohotra hanampy ireo tra-boina tamin'ireny ora voalohany ireny [taorian'ny zava-niseho]."
Nilaza ny mpitarika fa ny fahaiza-manao manerana ny firenena dia tokony hampiasaina haingana mba hisorohana ny fiakaran'ny isan'ny maty.
Ayatollah Khamenei niantso ny tafika Iran mba hanampy amin'ny famongorana ny rava sy famindrana ireo naratra any amin'ny tobim-pitsaboana.
Lehilahy Iraniana iray no mijoro eny an-dalambe miaraka amin'ireo zanany roa lahy ao an-tanànan'i Sanandaj, any amin'ny faritany Kermanshah Iraniana, taorian'ny horohoron-tany mahery 7.3 tamin'ny 12 Novambra 2017.
Misaraka dia niresaka an-telefaonina tamin'ny minisitry ny atitany Iraniana Abdolreza Rahmani-Fazli ny alahady alina teo ny filoha Iraniana, Hassan Rouhani, izay nampahafantatra ny filoha momba ny fanavaozana farany. Avy eo ny filoha Rouhani dia namoaka ny torolàlana ilaina hanamorana sy hanafainganana ny asa famonjena.
Andro telo nisaonana no nambara tao Kermanshah.
Tsapa ny horohoron-tany tany amin'ny tanàna any amin'ny faritany Iraniana maro hafa, anisan'izany ny lavitra toa an'i Tehran renivohitra.
Namindra ny tranony ny olona tao amin'ny faritanin'i Sanandaj Iraniana Andrefana taorian'ny horohoron-tany mafy 7.3 tamin'ny 12 Novambra 2017.
Ny horohoron-tany koa dia nampihorohoro ny faritany Iraniana tany Kordestan, Ilam, Khuzestan, Hamedan, Azarbaijan Andrefana, Azarbaijan Atsinanana, Lorestan, Qazvin, Zanjan, ary Qom.
Nisy fangovitana tany amin'ireo firenena isam-paritra, toa an'i Torkia, Koety, Armenia, Jordania, Libanona, Arabia Saodita, Qatar, ary Bahrain.
Saingy ny traboina sy ny fahasimbana dia tany Iran sy Iraq ihany.
Governemanta, tompon'andraikitra miaramila amin'ny zero
Ny filoha Rouhani dia kasaina handeha ho any amin'ny faritanin'i Kermanshah hanara-maso ny asa famonjena amin'ny talata.
Rahmani-Fazli, ny minisitry ny atitany ary ny minisitry ny fahasalamana, Hassan Ghazizadeh Hashemi dia efa nanidina tany Kermanshah mba hanara-maso manokana ny asa famonjena.
Tonga tao Sarpol-e Zahab, iray amin'ireo faritra tena voa mafy, ny komandin'ny tafika jeneraly ao amin'ny tafika Iran, Abdolrahim Mousavi, hanara-maso ny asa famonjena ataon'ny Tafika ao amin'ny faritra.
Ny lehiben'ny komandin'ny Corps de Garda Revolisiona Islamika (IRGC), ny jeneraly jeneraly Mohammad Ali Jafari, dia nandeha tany ihany koa.
Toy izany koa ny Lehiben'ny Polisy ao amin'ny Jeneraly Brigadier Hossein Ashtari.
Ireo mpamaly voalohany dia nampiasa alika mpitsangatsangana mba hitady izay mety ho tafavoaka velona ambanin'ny korontam-bato.
Nahazo fampandrenesana ny hopitaly any Tehran hitsaboana ireo naratra nafindra monina eto an-drenivohitra. Farafahakeliny fiara mpamonjy voina 43, fiara fitateram-bahoaka efatra, ary teknisianina miisa 130 no napetraka ao amin'ny seranam-piaramanidina Mehrabad any Tehran mba hamindrana haingana ireo niharam-boina tany amin'ny hopitaly.
Mpitsabo 100 mahery koa no nalefa tany amin'ireo faritra voadona. Ny Air Force Iraniana koa dia nametraka angidimby mba hanafainganana ny famindrana ireo naratra.
Nirohotra nankany amin'ny sampan'ny Fikambanana fampidiran-dra ny Iraniana mba hanome ra.
Fiononana avy any ivelany
Mandritra izany fotoana izany dia nanolotra fiaraha-miory sy fiaraha-miory amin'ny governemanta Iraniana sy ny vahoaka ireo olo-manan-kaja vahiny noho ny horohorontany.
Anisan'izany ny masoivoho alemanina any Iran Michael Klor-Berchtold, ny praiminisitra Tiorka Binali Yildirim, ny solontenan'ny Vondrona Eropeana Federica Mogherini, ary ny sekretera jeneralin'ny Firenena Mikambana Antonio Guterres.
Mandritra izany fotoana izany, ny filohan'ny fivoriamben'ny firenena mikambana dia niara-ory tamin'ny vahoaka iraniana koa noho ilay horohoron-tany nahafaty olona tany amin'ny faritany iraniàna andrefana.
Tamin'ny lahatsoratra iray tao amin'ny kaonty Twitter ofisialiny, Miroslav Lajčák dia naneho ny ahiahiny momba ny fiakaran'ny isan'ireo maty noho ny horohoron-tany, izay niharan'ny faritry ny sisintany teo anelanelan'i Iran sy Irak tamin'ny Alahady, ary nanamarika fa ny General Assembly dia nijoro niaraka tamin'ny governemanta avy amin'ireo firenena roa ireo ary ireo sisa velona tamin'ny horohoron-tany.
Nilaza ny tatitra fa olona 11 no maty tany Iràka. Irakiana 130 eo ho eo koa no naratra.
Niharan'ny horohoron-tany iray tany amin'ny hopitaly tao Sulaymaniyah, any Iraqi Kurdistan, tamin'ny 12 Novambra 2017. (Sary avy amin'ny AFP)
Any Irak, ny fahasimbana lehibe indrindra dia ny tanànan'ny Darbandikhan, 75 kilometatra atsinanan'ny tanànan'i Sulaymaniyah, ao amin'ny faritr'i Kurdistan semi-autonomous.
Raha ny filazan'ny minisitry ny fahasalamana kiorda, Rekawt Hama Rasheed, dia olona 30 no naratra tao an-tanàna. "Tena be krizy ny zava-misy any," hoy izy.
Ireo mpitsabo Iraniana dia namindra ny dahalo taorian'ny horohorontany nahatratra 7.3 tany amin'ny tanànan'ny Sarpol-e Zahab, any amin'ny Provinsi Kermanshah, 13 Novambra 2017.
Las Vegas fizahan-tany sahirana aorian'ny fitifirana be?